Tech မှ Next ကိုဖွင့်တင် 3D Theme APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » Tech မှ Next ကိုဖွင့်တင် 3D အဓိကအကြောင်းအရာ
Tech မှ Next ကိုဖွင့်တင် 3D Theme APK ကို
Tech မှ Next ကိုဖွင့်တင် 3D အဓိကအကြောင်းအရာ
Tech မှ Next ကိုဖွင့်တင် 3D အဓိကအကြောင်းအရာပံ့ပိုးမှု 3D နှင့် 2D mode ကို! 95 icon များ,7HD ကိုနောက်ခံပုံများ! သင် theme.Please Play ဂူဂဲလ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုမှုနှုန်းပေးကြိုက်တယ်မျှော်လင့်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဤလျှောက်လွှာအခမဲ့ဖြစ်တယ်, ကဲ့သို့သောစောင့်ရှောက်ဖို့နဲ့သငျသညျအနာဂတျတှငျဤကဲ့သို့သောနောက်ထပ် app ကိုရောက်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ကို enable နိုင်ရန်အတွက်ကျနော်တို့ LeadBolt အားဖြင့် browser ကိုအသုံးပြုကြသည်နှင့် mobileCore အားဖြင့်ကြော်ငြာတွေပလက်ဖောင်းကိုအသုံးတဲ့ကြော်ငြာတွေထည့်သွင်းခဲ့ကြသည်။ စီမံကိန်းကိုထောကျပံ့ဖို့တပ်ဆင်ပြီးနောက် "ကိုဖွင့်" ။
ဆောင်ပုဒ်၏ installation ညွှန်ကြားချက်:
1 ။ သင့်အိမ် launcher အဖြစ် Next ကို launcher ကို install လုပ်ခြင်း
2 ။ ဆောင်ပုဒ်ကိုသုံးပါ:
- (2D mode ကို):? enu - အဓိကအကြောင်းအရာ - Installed - ကိုကလစ်နှိပ်ပါအိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ် "Tech မှ" - Applay - ပြီးပြီ
- (3D mode ကို):? enu - Preferences - ok - - မီနူး - ဆောင်ပုဒ် - installed - ကိုကလစ်နှိပ်ပါအိုင်ကွန်ဆောင်ပုဒ် "Tech မှ" - Applay - ပြီးပြီ 3D မြင်ကွင်းတစ်ခု mode ကိုမှပြောင်းလဲမည်
3 ။ နောက်ခံပုံများအသုံးပြုပါ: Menu ကို - Wallpaper - ပွတ်ဆွဲ - အိုင်ကွန် Tech မှကိုကလစ်နှိပ်ပါ - ကြည့်ရန်နောက်ခံများ - သတ်မှတ်မည် Wallpaper - Done!
E-mail ကို: liangrumiaos@163.com
ဒီအပြင်အဆင်ကိုနောက် launcher ဆောင်ပုဒ်ထုတ်လုပ်သူသို့မဟုတ် zt.art နှင့်အတူဆက်နွယ်ခြင်းမရှိပါ